Iindlela zokuhlawula | Elula kwaye elula | Ipapernerds
Iindlela ezi-3 zokuhlawula
Intlawulo engahlawulwanga ngekhomishini
SIYAKWAMKELA OKU KULANDELAYO
Unoku-odola inkonzo yethu ngokuthi Mastercard Hlawula ngolu hlobo lulandelayo:
Ubhalisa kwindawo yamalungu kwiwebhusayithi yePapernerds.de.
Emva koko uye kwiphepha «Iodolo zam».
Emva koko ukhethe iodolo yentlawulo yakho.
Cofa kwindawo ethi “Hlawula ngesibophelelo”.
Khetha: «Intlawulo ekhethekileyo» okanye «Intlawulo epheleleyo».
Cofa ku "Bhatalela iodolo".
Khetha «VISA» okanye «Mastercard» indlela yentlawulo.
Gcwalisa iindawo ezinyanzelekileyo kwiphepha elibhaliweyo.
Cofa kwindawo ethi "Hlawula ngoku!"
Emva kokuhlawula ngempumelelo uya kuthunyelwa kwindawo yamalungu.
Unoku-odola inkonzo yethu ngokuthi Sofortuberweisung Hlawula ngolu hlobo lulandelayo:
Emva koko yiya kwiphepha "lee-odolo zam".
Cofa ku “Bhatala iodolo”.
Khetha indlela yokubhatala "Sofortüberweisung".
Gcwalisa onke amasimi kwiphepha elibhaliweyo.
Unoku-odola inkonzo yethu ngokuthi Ukuhlawula iAmazon Hlawula ngolu hlobo lulandelayo:
Emva koko uye kwiphepha elithi "Imiyalelo yam".
Khetha indlela yokubhatala "yeAmazon pay".
Ndi-odola njani umsebenzi kwaye ndifumana njani isibonelelo?
Ngaba ndingarhoxa kumyalelo emva kokuba ndithumele ifom yesicelo?
Uqinisekisa ngantoni emsebenzini endi-odoleyo?
Ngaba amaxesha okuhambisa anokuhlengahlengiswa kwiimfuno zam?
Funda ngokugqithisileyo ...